दिक्तेल बजारमा घरेलु मदिरा नष्ट गरिएको विषयमा नगर प्रमुख (दीपनारायण रिजाल)ले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन् । नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, घरेलु र कर कार्यालयले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने नाममा लोकल रक्सी जफत गर्छ । तर, नगर प्रमुखले भोलिपल्ट यस विषयमा नगरपालिकाको संलग्नता नरहेको कुरा बताउँछन् ।
यस विषयमा मेरा केही प्रश्नः
१) मेयर साप स्थानीय सरकारलाई कुनै कुरा नसोधी यो कार्य अन्य कार्यालयले मात्रै गर्‍यो होला त ?
२) नगरपालिकाको संलग्नता छैन भने नगरपालिकाले प्रतिनिधि र जफत गरेको रक्सी बोक्ने गाडी किन पठाउनु भएको ?
३) नगरपालिकाकै कार्यालय पछाडिको ठाउँमा जफत गरेको रक्सी तपाईंको प्रतिनिधिसहितको टोलीले नष्ट गरेको छ र पनि मलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ ?
४) यदि नगरपालिकाको संलग्नता छैन र यो कार्य तपाईंलाई नसोधी गरिएको हो भने नगरपालिकाबाट अनुगमनमा खटिएको प्रतिनिधि कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने हिमत छ तपाईंसँग ?
५) यस्ताखाले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएर तपाईं भाग्न मिल्छ ? यस घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंले लिनुपर्छ ।
स्मरण रहोस् मेयर साप नेपालको ऐन, कानुन बन्नुभन्दा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि यहाँको आदिवासी जनजाति समुदायले घरेलुु रक्सी उत्पादन गरेर आफ्नो संस्कार, संस्कृति मान्दै आएका छन् । रक्सी बिना हाम्रो कुनै पनि कार्जे गर्न सकिदैन ।यो घटनाले सिंगो आदिवासी जनजाति समुदायमा गहिरो चोट पुगेको छ । त्यसकारण तपाईंले आदिवासी जनजाति समुदायसँग माफी माग्नैपर्छ ।
अन्त्यमा, घरेलु मदिरालाई कानुनको दायरामा लिएर कानुनी रूपमै उत्पादन र खरिद बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा अनुरोध गर्दछु ।
(खम्बुकाे फेसबुकबाट । उनी समाजवादी पार्टीका विद्यार्थी नेता हुन् ।)